DEG DEG: Sargaal kudhaawacmay qarax kadhacay agagaarka madaxtooyada Puntland ee magaalada+Faah faahin - www.xogtashacabka24.com | www.xogtashacabka24.com DEG DEG: Sargaal kudhaawacmay qarax kadhacay agagaarka madaxtooyada Puntland ee magaalada+Faah faahin - www.xogtashacabka24.com
DEG DEG: Sargaal kudhaawacmay qarax kadhacay agagaarka madaxtooyada Puntland ee magaalada+Faah faahin
Published on December 6, 2017 by admin · No Comments
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug qarax gaari lagu xiray ayaa wuxuu ka dhacay Magaaladaasi.
Qaraxan ayaa wararka waxa ay sheegayaan inuu ka dhacay dhabarka dambe ee wadada marta Madaxtooyada Magaalada Gaalkacyo qaybta maamul goboleedka Puntland iyadoo dhaawac culus uu sidoo kale soo gaadhay Sargaalkii watay gaadhigaasi.
Sargaalka qaraxa lala beegsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Cali Magafe wuxuuna ka tirsan yahay ciidamada Booliska dowlad goboleedka Puntland wakhtiga la qarxinaayay gaadhigiisa ayuu wuxuu u sii socday goobtiisa shaqada.
Goobta qaraxu uu ka dhacay ayaa waxaa gaadhay ciidamo ka tirsan Booliska dowladda Puntland kuwaasi oo goobta ka qaaday dhaawaca Sargaal Cali Magafe waxayna geeyeen Isbitaalka Magaalada Gaalkacyo.
Ma jirto wali cid sheegatay in ay ka danbaysay qaraxa balse qaraxyada dalka Somalia ka dhaca ayaa intooda badan waxaa sheegta ururka Al-shabaab iyo Kooxda Daacish oo ku sugan qaybo kamid ah dalka Somalia